Ukukhulelwa kwe-intrauterine mhlawumbi yindlela eqhelekileyo yokukhulelwa. I-WHO ibonisa iinkcukacha malunga neli xesha malunga nabameli abangama-70 abesetyhini bathanda lolu hlobo lokukhusela ekukhulelweni okungenakulungiswa. E-Rashiya, isixhobo se-intrauterine, i-pros and cons eyokuthi ichazwe ngezantsi, yileyokuqala kuzo zonke iindlela zokukhusela kwabafazi.
Okwangoku kukho ezininzi iintlobo zemimoya. Iindidi ezidumileyo kunye eziqhelekileyo zentambo ye-intrauterine yintonga encinci ye-T eyenziwe ngeplastiki eboshwe ngentsimbi. Umphumo walo wokukhulelwa komzimba kukuba awuvumeli ukuba i-spermatozoa ingene ngaphakathi kwidumbu le-uterine ngokunciphisa ixesha lokuvuthwa, kwaye ikhusela iqanda eliqhotyisiweyo ukuba lingabambisanga kwisigxina se-uterine.
Isixhobo se-intrauterine: pluses
Okubaluleke kakhulu kwimeko yabasetyhini abaxakekileyo abakhutheleyo ubude bokukhusela ekukhulelweni kweminyaka emithathu ukuya kweyintlanu, eli xhomekeke kuhlobo lokuvutha. Impembelelo ifumaneka emva kwenkqubo enye, efanelekileyo kakhulu. Kubasetyhini abaneminyaka engama-40 emva kwayo, nayiphi na i-spiral ene-copper itholakala kwisibeletho ngaphambi kokuqala kokuphuma kwesisu.
Kwakhona, iingenelo zeNavy zi:
Ukusebenza kakuhle kwendlela yokukhulelwa komzimba. I-index ye-Perl ye-IUDs ene-hormone ene-HUDs i-0.1 ukuya kwi-0.2 ngekhulu labasetyhini / iminyaka, kwaye i-spiral ye-copper engama-0.4 kuya kwe-1.5 ngekhulu labasetyhini / iminyaka.
Indlela ibuyiselwa. Ukuba unqwenela, isigulane sikhoxiswa naliphi na ixesha. Ngelo xesha, abafazi abafuna ukuba ngumama bangakwazi ukuqala ukukhulelwa ngokukhawuleza emva kokuphela kokusetyenziswa kwemoya.
Le ndlela ingasetyenziswa ngaphandle kwemvume kunye nokuthatha inxaxheba kwintsebenziswano yezesondo
Ukusetyenziswa okungezelelweyo okubandakanya ukulala ngesondo akudingeki.
IUD ayichaphazeli kakuhle impilo kunye nemeko yowesifazane, ayiyikukhubekisa inkqubo yezifo ezingekho komzimba.
Ezinye iziyobisi azinciphisi ukusebenza kwe-IUD.
Iindleko zendlela aphezulu, ngoko i-IUD iyafumaneka kuyo yonke intlalo yoluntu yoluntu.
Intrauterine ukuvutha: iindleko
Ukungaphumeleli kokusebenzisa le ndlela kuyimfuneko yokungena kwinkqubo yezokwelapha kwintlanganiso yokubhinqa kwabesetyhini yokumisela nokukhangela ukunyuka, nangona ukudibanisa ngokucacileyo kukuba le nkqubo iyenzeka yonke iminyaka emithathu ukuya kwemihlanu.
IUDs eneempembelelo ezichaphazelekayo: ngexesha lokuqaliswa kokuvuthwa, ukuphuma kwamanzi kungabikho - ukusuka kumathathu ukuya kweyesithoba kwimeko, i-perforation ye-uterus (i-injection eyodwa ukuya kwe-5000 ye-IUD), kwaye umonakalo wesibeleko nayo inokwenzeka.
Impumelelo yokuphathwa kakubi kuxhomekeke kwisiqinisekiso kunye namava ogqirha, iimpawu ze-anatomical kwinkqubo yokuzala yesigulane.
Ukufumana ubuhlungu okanye ukutyumba - malunga neenyanga ezintathu emva kokuqala kokusetyenziswa kwe-IUD. Isizathu - impazamo ekukhetheni ukuhamba, ukubeka i-IUD (3-4%) ngokungafanelekanga, ukwandisa i-uterus.
Kwi-5-15% yamatyala, ukwanda kwe-uterine yokuphuma kwegazi ngenxa yokulimala kombane kwi-endometrium kwindawo yokudibanisa kunye nomoya. Kwimeko yokusetyenziswa kwe-IUD encinane, kunye nokubandakanywa kwamahomoni okanye ubhedu, ukulahleka kwegazi ngexesha lokuya esikhathini kuncitshiswa.
Kwi-2-7% yamatyala, kukho ukuxoshwa, ngamanye amagama, ukulahlekelwa kwe-IUD ukusuka kwisibeleko ngunyaka wokuqala. Ngokuqhelekileyo oku kwenzekayo ngexesha lokuya esikhathini.
Kungenzeka ukuba ngokumalunga nemvelaphi yokukhuselwa kweNavy, owesifazane uya kukhulelwa. Ngokuqhelekileyo oku kwenzeka kwiimeko zokulahlekelwa okuthe ngqo okanye okupheleyo kokuvutha.
Kwi-1,9 - 9,25% yamatyala, ukukhulelwa kwe-ectopic kwenzeka. Umxholo wobhedu kwi-contraceptive unciphisa umngcipheko.
Kwi-0.4-4% yamatyala, iinkqubo ezivuthayo zivela kwizitho zangasese. Ngokuqhelekileyo, banxulumene nobukho beentlobano zesini (STDs), okanye ukugqithisa ukuguquka okungapheliyo.
Kukho ixesha elinokuthi lithathwe njengezinto ezincinci zendlela, kodwa eqinisweni ziya kuba zidibeneyo ezicacileyo. Le miqathango ilandelayo ingabelwa kwezi zihlandlo:
Ngenisa uze ususe i-IUD kufuneka ibe yinkwenkwe eqeqeshelwa kakuhle esibhedlele okanye ukubonisana kwabesifazane.
Ngaphambi kokusetyenziswa kwendlela, kubalulekile ukuba ufumane uviwo kwiingcebiso zabasetyhini, ukuba kuyimfuneko, imfundo yempilo.
Ungayomeleza njani imisipha yomzimba ngexesha lokukhulelwa?
Ikhalenda yokukhulelwa: iiveki ezingama-29
Ikhalenda yokukhulelwa: iiveki ezi-8
Ziziphi iimvavanyo ezithathayo ngexesha lokukhulelwa?
Amayeza okulwa namagciwane achaphazela njani ukukhulelwa?
Iiveki zokuqala zokukhulelwa: kwenzeka ntoni kumzimba kamama
Umfanekiso wokuqala womtshato kaMaladze uthintela kwiWebhu
Ukupheka ukhilimu omuncu
Amadoda kunye noxinzelelo
I-Chamomile kwiibhotile zeplastiki
I-Hamburger enee-porcini amakhowe
Unyango lwe-preeclampsia ekhaya
Ukunyuka kwesisindo emva kokubeleka
23 Iingcebiso Zomnikelo NgoFebruwari 23
UJuna Davitashvili wasweleka eMoscow ngaphandle kokubuyisa
Iidlela zokufumana i-salads imihla ngemihla
Ukuncelisa nokukhulelwa okusha